Imbali yaseWykoff Jail Haus - I-Airbnb
Imbali yaseWykoff Jail Haus
Indlu encinci sinombuki zindwendwe onguCity Of Wykoff
UCity Of Wykoff yi-Superhost
Yiza ujonge iMbali yeWykoff Jail Haus. IJail Haus yakhiwa ngasekupheleni kweminyaka yoo-1800 kwaye iseyeyesixeko saseWykoff. Kufuphi neendlela zebhayisekile, ukuloba iitrout, ipaki yaseForestville State, kunye nokuphononongwa komqolomba. Siya kuhlala sivulekile kwiinyanga zasebusika ukuze ukonwabele ukuhamba ngekhephu, ukukhwela ikhephu, ukutyibilika ekhephini, ukuzingela kunye neminye imisebenzi yasebusika. Iindawo zokudlala, iindawo zokutyela, eziluncedo / isikhululo serhasi konke kumgama wokuhamba. Ifumaneka kwiikhilomitha ezingama-40 kumzantsi weRochester kwidolophu yabantu abangama-450.
Amagumbi amabini amancinci anegumbi lokuhlambela. Sinikezela ngebhedi entofontofo yobukhulu bokumkanikazi kunye nabantu abanomdla, iibhedi ezimbini zentolongo. Umxinwa omncinci wokulala kodwa ukhululekile nangona kunjalo! Ukuba ujonge iplushy, kungcono udlule, kodwa uya kuphoswa ngamava amnandi!
Indawo ezolileyo nazo zonke izinto eziluncedo kumgama wokuhamba, kodwa ukuba yidolophu encinci, emva kwe-5:00 PM iinketho zincinci. Nangona kunjalo, amathuba amaninzi okutyela ngaphakathi kwemizuzu eyi-10! Ukuba ujonge ukonwaba okanye ubomi basebusuku, ayisiyiyo indawo yakho le. Sine-WIFI kunye ne-TV encinci yokusakaza.
Umbuki zindwendwe ngu- City Of Wykoff
Ukuzihlola ngokwakho kodwa uncedo kukufowunela kude!